अन्य यात्रा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: अन्य पर्यटन
तपाईं नोभेम्बर सुरुमा समुद्री किनारमा कहाँ जानुहुन्छ?
जहाँ तपाईं नोभेम्बरको सुरूमा समुद्रमा आराम र पौडी खेल्न सल्लाह दिनुहुन्छ? छनौट अवश्य तपाईंको हो, तर म तपाईंलाई निश्चित रूपले क्राइमिया भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छु: http://ntk-intourist.ru/rev_ntk.aspx?id=991amp ;utm_source=siteamp ;utm_medium=banner_smallamp ;utm_camp अभियान=crimea_211015#/1043। तिनीहरू पनि सोची मा भन्छन् ...
कुन धातु सामग्री? आधुनिक पर्यटक चकमक उत्पादन?
धातु भनेको के हो? आधुनिक पर्यटक चकमक उत्पादन? फेरोसेरियम rare दुर्लभ पृथ्वी धातुहरूको एक मिश्र धातु आधुनिक चकमक एक पाइरोफोरिक मिश्र धातुबाट बनाइएको डन्डा हो - एक कुचुरमा क्रसिंगमा सहज प्रज्वलित गर्न सक्षम एक मिश्र ...
यसलाई उत्तर दिनुहोस्। जब तपाईं रेलिङ टिकट लिनुहुन्छ। त्यहाँ ठूलो परिवारको लागि कुनै छूट छ? मास्को देखि सेन्ट पीटर्सबर्ग सम्म?
उत्तर जब तपाईं ट्रेन टिकट लिनुहुन्छ। त्यहाँ ठूलो परिवारहरु को लागी छुट छ? मस्कोदेखि सेन्ट पिटर्सबर्ग? क्रास्नोयार्स्क रेलवेको वेबसाइटमा यस्तो जानकारी छ: "ठूला परिवारहरू - 50०% छुट छ ...
मस्कोमा टैंकको संग्रहालय कहाँ छ?
मस्कोमा ट्या tankक संग्रहालय कहाँ छ? त्यहाँ छ। ... कुबिंकमा M-52 राजमार्गको km२ किलोमिटरमा। मस्कोमा, अझ स्पष्टसँग, उपनगरहरूमा कुबिंकामा ट्या tankक संग्रहालय छ। तर यो संग्रहालय क्षेत्र मा अवस्थित छ ...
मलाई भन्नुहोस् कि गारंटीकृत आरक्षण, गैर-ग्यारेन्टी, ओभरबुकिंग
मलाई भन्नुहोस् ग्यारेन्टी गरिएको आरक्षण के हो, ग्यारेन्टी छैन, ओभरबुकिंग त्यहाँ धेरै प्रकारका आरक्षणहरू छन्: ग्यारेन्टी गरिएको आरक्षण होटेलको विशेष पंजीकृत पुष्टिकरणको साथ आरक्षण हो जुन ग्राहकलाई अर्डर प्राप्त गर्न ग्यारेन्टी दिन्छ ...
तपाईंलाई एक यात्रा एजेन्सीमा काम गर्न आवश्यक छ? आवश्यकताहरू के हो र काम के हो?
तपाईलाई ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्न के चाहिन्छ? के आवश्यकताहरू छन् र काम के हो? कार्य अनुभव.. । र साक्षरता, शब्द "ट्राभल एजेन्सी" रुसीमा छैन। ट्राभल एजेन्सी, परीक्षण शब्द एजेन्ट हो। तर ...
पोलीफिल के हो? र यो राम्रो होलफिबर हो?
एक पोलिफिल के हो? र यो holofiber भन्दा राम्रो छ? नयाँ जेनेरेसन इन्सुलेशन - आयातित सामग्री पोलीफिल पोलीफिल (पोलिफिल) एक नयाँ अत्यधिक कुशल छ, कम्प्रेसनको बृद्धि प्रतिरोधको साथ, राम्रो वेंटिलेशन प्रदान गर्दै उत्कृष्ट ...
उडानमा कुन प्रार्थना पढ्छ। म पहिलो पटक उडानमा उडिरहेको छु। यो भयानक छ, यो पहिले देखि नै भयानक छ
उडानको समयमा कुन प्रार्थनाहरू पढ्छन्। यो पहिलो पटक म हवाइजहाजमा उडान गर्दैछु। यो डरलाग्दो छ, पहिले नै डरलाग्दो छ। त्यहाँ प्रार्थना छ "एयर ट्र्यावलमा जानु अघि प्रार्थना गर्नुहोस्" - म सधैं पढ्छु) प्रार्थना गर्नु अघि जानुहोस ...
यातायातको कुन मोड सुरक्षित छ - विमान वा ट्रेन?
यातायातको कुन मोड सुरक्षित छ - विमान वा ट्रेन? ट्रेन, निश्चित रूपमा ...। यो ट्रेनको साथ हो जुन वास्तविक यात्रा बाहिर जान्छ) स्वाभाविक रूपमा रेल। गन्ध भनेको तथ्या is्क हो। त्यसपछि विमान। सबैभन्दा खतरनाक कार हो। ट्रेन, सामान्यतया, ...
कहाँ पत्ता लगाउन मलाई विदेश जानुपर्छ वा?
तिनीहरूले मलाई विदेशमा छोड्ने छन् कि छैन भनेर कहाँ पत्ता लगाउने? अभियोजकको कार्यालयमा। रेजिष्ट्रेसनको ठाउँमा बेलीफ सेवामा। यो महत्त्वपूर्ण हो कि debtणको वास्तविकता होइन, तर यो यस debtणका लागि स्वीकार गरिएको छ कि छैन ...
एक एकाग्रता शिविर के हो?
एकाग्रता शिविर के हो ?? चो, कार्यक्रम सुन्नुभयो? शिविरमा कन्सर्ट ... तर वास्तवमा हास्यास्पद छैन ... एक यातना शिविर, एक स्थान जहाँ युद्धको बन्दीहरु, बंधकहरु, र सामाजिक रूपले खतरनाक मानिसहरु राखिएको छ। एकाग्रता ...
विमान को उडान को स्थिति कसरि पत्ता लगाउने?
म कसरी विमान उडानको स्थिति थाहा पाउन सक्छु? मैले मेरो मनपर्ने कम्पनीलाई संयोगले मात्र पाएँ!) सामान्यतया, हामी यससँग करीव years बर्षदेखि काम गरिरहेका छौं। हामी नियमित रूपमा हाम्रा पर्यटकहरूको समूहलाई भ्रमणको लागि, मास्को वरिपरि सर्वेक्षणहरूको लागि मिनी बसहरू माग गर्दछौं।
एपलाचियन पर्वत कहाँ छन्?
अपलाचियन पहाडहरू कहाँ छन्? उत्तरी अमेरिकामा - यदि तपाईं उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा माथिको पोस्ट पढ्न धेरै अल्छी हुनुहुन्छ ... सर्गासो सागरको किनार ... अप्पालाचियन पर्वतहरू उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा पर्वतीय प्रणाली हुन् ...
कम्पास कसरी नेभिगेट गर्ने हो? आफ्नै शब्दमा व्याख्या गर्नुहोस्।
कम्पासको साथ कसरी नेभिगेट गर्ने? आफ्नै शब्दमा वर्णन गर्नुहोस्। एर्रोको निलो अन्त उत्तरतिर, रातो - दक्षिणतिर इशारा गर्दछ। यदि तपाइँले बाणको नीलो अन्तले पोइन्ट गर्नुभयो भने, तपाइँको बायाँ तर्फ तपाइँ पश्‍चिमतिर जानुहुनेछ, ...
फोर्नन एम को है जो फोर्ने मग्नल हो? र त्यो पहिलो यात्रा के हो
फर्नान्ड मि। को हो फर्नाण्ड म्यागेलान? र उनले के बललाई स्किर्ट बनाएको पहिलो यात्राले उसको परिभ्रमणको सुरुमै म्यागेलन एक अनुभवी समुद्री ब्वाँसो भइसकेको थियो। उसको पहिलो यात्रा ...
कोकेशसमा कस्ता शहरहरू समावेश छन्? मलाई कोकेशसमा कुन शहरहरू बुझ्न मद्दत गर्नुहोस्
ककेशसमा कुन शहरहरू सामेल छन्? मलाई काकेशस माखाचला, ग्रोज्नी, नाल्चिक, प्याटिगोर्स्क, किस्लोभोडस्क, आदि कुन शहरहरू छन् भनेर बुझ्न मद्दत गर्नुहोस् प्रश्न पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन काकेशसमा, त्यहाँ शहरहरू छैनन्, त्यहाँ कार्यालयहरू छन् ...
पेन्ज़ा कहाँ छ?
Penza कहाँ स्थित छ? Penza Chemodanovka पछाडि अवस्थित छ, यदि यसले तपाईंलाई तपाईंको मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ भने। यो Lermontov र Belinsky को जन्मस्थल हो। र पनि काबेवा र पाभल भोल्या। नक्सामा हेर्नुहोस्! र काबाएवा ...
बास्किहरू को हुन्? अनि हामी मान्न सक्छौं कि बार्सिलोना एक बास्क देश हो?
बास्कहरू को हुन्? र बार्सिलोना बास्क देश हो? विकिपेडिया तपाईंलाई मद्दत गर्न: रु। विकिपीडिया org / wiki / Basques गम्भीर केटाहरू, दुर्भाग्यवस, के छैन आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित छ ...
तैरपमा कुन बिरुवाहरू छन्?
दलदलमा त्यहाँ के बिरुवाहरू छन्? क्रैनबेरी सायद स्यान्डव क्रैनबेरी मोस स्फग्नम जंगली रोजमेरी सेड स्प्याग्नम क्रैनबेरी, लिंगोनबेरी, ब्लूबेरी, सिन्कफोइल, स्फग्नम काई। रूखहरू पनि बढ्छन् (बिर्च, बिर्च), केवल बौनेहरू। duckweed अन्नोना चिकनी बर्च बिर्च ...
Kakm यूक्रेनी मा राम्रो दोपहर भन्छन्, हैलो, अलविदा?
म कसरी युक्रेनी, नमस्कार, बिदाइमा शुभ बेलुका भन्न सक्छु? शुभ दिन, शुभ दिन, बदमाश, शुभकामना, शुभ दिन, शुभ दिन शुभ दिउँसो - (शुभ दिन), शुभ दिन - (राम्रो दिन) राम्रो ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ9अर्को पाना
49 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,568 प्रश्नहरू।